Liraglutide: Mushonga wakanaka wekurapa Chirwere cheshuga Mellitus Type 2 uye Obesity
2. Liraglutide chimiro
3. Liraglutide chiratidzo
4. Liraglutide mashandiro ekuita
5. Iyo Dosage uye Kuteedzera Mirayiridzo yeLiraglutide
6. Ndezvipi zvakanakira Liraglutide?
7. Iwe unofanirwa kutarisira izvo zvinotevera madhara / yambiro kana uchishandisa Liraglutide
8. Liraglutide kudyidzana
9. Clinical Zvakaitika
Liraglutide (204656-20-2) mushonga unotengeswa pasi pezita rakasarudzika mazita munzvimbo dzakasiyana dzenyika, ayo anoshandiswa zvakasiyana pakurapa. Iwo anonyanya kuzivikanwa mazita eLiraglutide pamusika nhasi Victoza uye Saxenda. Iyo Liraglutide inoshandisa inotsamira pane iyo brand yaunotenga, semuenzaniso, Victoza inonyanya kushandiswa nekurovedza muviri kwakaringana uye kudya kunosimbisa kudzora shuga yeropa muvakuru uye nyora 2 chirwere cheshuga mellitus muvana veanopfuura makore gumi. Uye zvakare, Victoza yakaratidzawo kuve yakakosha mukuderedza njodzi dzezvinetso zvemwoyo sekurova kana kurova kwemoyo muvakuru vane chirwere chemoyo uye Type Type yeshuga ye2.
Pane rimwe divi, Saxenda, iyo zvakare imwe Liraglutide brand, inoshandiswa nekudya kwakaringana uye kurovedza muviri kubatsira vashandisi kuti vadzikise huremu kana vachirwara nemamiriro akasiyana ehutano. Kunyangwe kuve zita reLiraglutide zita, Saxenda haishandiswe pakurapa kwemhando 1 kana Type Type yeshuga, uye zvakare haisi yekudzvinyirira kana yekuderedza uremu. Chiremba wako anogona zvakare kukurudzira Liraglutide inoshandisa nekuda kwezvimwe zvikonzero zvisina kubatanidzwa mugwaro iri. Zvisinei, zviri here kuti nguva dzose kuwana kodzero Liraglutide dose kubva chiremba wako kuti zvabuda nani.
Liraglutide yekutengesa inowanikwa pane akasiyana online mashopu uye epamakemikari epanyama, asi iwe unofanirwa kugara uchingwarira nezvekwaunobva. Gara uchitsvaga hwakakodzera kuti uve nechokwadi chekuti unowana mushonga wako kubva kumutengesi akavimbika uye ane ruzivo. Hunhu hwemishonga yaunotora ine hukasha pamhedzisiro yauchazowana mukupera kweteshi. Iyo Liraglutide mutengo inogona kusiyana kubva kune imwe kubva kune imwe asi ita shuwa kuti iwe unowana yakanyanya kunaka. Kana iwe usina chokwadi nezvekwainobva, bvunza nemushonga wako.
Chemical, Liraglutide chimiro inoumbwa neyakareba-uchiita mafuta acylated glucagon-kunge peptide iyo inobatirwa zvisingaiti pamwe chete ne antihyperglycemic chiitiko. Iyo yekudhakwa kwenguva refu yechiito ndeye mhedzisiro yemafuta acid, uye Palmitic acid inosungirirwa kune GLP-1, inosunga nyore nyore neine albumin. Iyo albumin inosunga inoita basa rakakosha mukudzivirira Liraglutide kubva pakusvibiswa nekukasira kana iwe uchinge watora mishonga yako, uye semhedzisiro, inotungamira mukuburitswa uye kunononoka kuburitswa kweGLP-1. Izvi zvinoita kuti uve nechokwadi chekuti unowana mhedzisiro inodiwa mukati menguva pfupi pfupi inogoneka
FDA yakabvumidza vese Victoza uye Saxenda kurapwa kwemamiriro akasiyana ekurapa muUnited States of America. Sezvambotaurwa, Victoza akatenderwa kurapwa kwezvematambudziko emoyo uye aina Type yeshuga ye2. Izvo zvinozivikanwa zvakare nekudzikisa zviratidzo zvegomarara sekushamba, kusvotwa, uye manyoka. Saxenda yakatenderwa zvakare neFDA kubatsira mukurapa kufutisa uye kudzora muviri. Liraglutide inofanira kutorwa kana iwe uchida kudzikisa matambudziko emwoyo zvinokonzerwa nezvirwere zvemoyo kana Type Type yeshuga ye2. Zvakare, kana iwe uchida kudzora uremu hwemuviri wako zvichikonzerwa nerudzi 2 chirwere cheshuga mellitus, kufutisa kweLiraglutide kuchava mushonga wakanaka kwauri. Liraglutide kufutisa yabatsira zvakare vashandisi vazhinji kugadzirisa uremu hwavo. Kunyangwe iwe ukasangana nezviratidzo zvinogona kurapwa neLiraglutide poda, usatore mushonga wacho pasina kubvunza nyanzvi yehutano. Nekudaro, rangarira kuti chiremba wako anokwanisa zvakare kukuisira uyu mushonga kuti iwe ubatsire pakurapa kwehumwe humwe mamiriro ekurapa asina kunyorwa muchinyorwa ichi.
Muzviitiko zvakawanda, Liraglutide inoshanda zvinoenderana nezvamunoda kuzadzisa panopera dosage kutenderera. Semuenzaniso, iyo Liraglutide mechanism yechiito chevanhu vari kutora liraglutide dheti yekudzikisira uremu zvakasiyana nevashandisi vari kuitora kurapwa kwerudzi rwe 2 chirwere cheshuga mellitus. Iwo maviri mairaira eLiraglutide mazita Victoza naSaxenda shanda zvakasiyana kana vapinda mumuviri wako.
Semuenzaniso, Liraglutide kufutisa (Saxenda) inoshanda nekudzvanyirira kugadzirwa kweanodakadza mahormone (glucagon-like-peptide kana GLP-1) mumuviri wako, unodzora nzara yako. Iyo nguva iyo GLP-1 kugadzirwa kunodzikira, kudya kwako kuchaenda pasi uye kupedzisa kudya mashoma macalories, uye nekufamba kwenguva, kurasikirwa nemuviri wako. Makoriyori ane mutoro wekuwedzera kwako uremu, uye kana uchigona kuzvidzora, zvino zvichave nyore kwauri kuti uregedze mamwe mapaundi.
Kune rimwe divi, Victoza anoshanda nenzira nhatu dzakasiyana kuendesa zvayakavimbisa nemugadziri wezvinodhaka. Kutanga, Victoza anoshanda nekudzora chikafu chinosiya dumbu rako, chinotungamira huwandu hweshuga yeropa mumuviri wako. Kunyangwe machina akafanana, iwo mushonga zvakare unodzivirira chiropa chako kubva mukugadzira shuga yakawanda. Chekupedzisira, Liraglutide, inova chikamu chikuru muVictoza, zvakare inomutsa pancreas yako kuburitsa yakawanda insulin kana huwandu hweshuga yeropa hwakwira. Mushonga unokwidziridza zviitwa izvi zvese nekusimudzira kushanda kwea beta maseru. Masero anobatsira mukudzora shuga yeropa nekuburitsa insulin, iyo inokanganisa huwandu hweshuga mumuviri wako system. Iko kukurudzira kwekugadzirwa kwe insulin mumuviri wako ndicho chikonzero chikuru nei Victoza ichinyanya kushandiswa mukurapa kwe Chinyorwa 2 chirwere cheshuga mellitus.
Liraglutide inoshandisa inosiyana kubva kune mumwe mushandisi kuenda kune mumwe zvichienderana nemamiriro ehutano ari kurapwa. Mushonga wemushonga unofanirwa kuiswa nachiremba wezveutano zvichienderana nemamiriro arikurapwa. Vana vane makore ari pasi pegumi havarayirwi kutora mushonga uyu, sezvo uchigona kuvaratidza pundutso. Miviri yevanhu zvakare zvakasiyana, uye ndosaka zvichikosha kuti uende kunoongororwa nanachiremba usati watanga kutora chero mushonga. Kunyangwe Liraglutide inouya nemiyero yemirairo inokurudzirwa nemugadziri, dzimwe nguva inogona kunge isingashande iwe. Chiremba ndiye chete munhu akakodzera kuti aise iyo chaiyo Liraglutide dosage kwauri mushure mekuongorora hutano hwako mamiriro.
Liraglutide mushonga unokuvadza uyo unofanirwa kupihwa mu ruoko rwako rwekumusoro, mudumbu, kana pahudyu. Iko hakuna yakatarwa yakatarwa nguva yekuti utore yako Liraglutide dose, asi iwe unogona kuitora ne kana kana isina chikafu. Iwe unogona kugara uchitenderera iyo liraglutide sindano nzvimbo kuti udzikise mhedzisiro kana marwadzo aungangonzwa munharaunda. Iyo danho rekutonga nguva inogona kushandurwa zvakanaka pasina kugadzirisa iyo yakatarwa dosage. Zvinokurudzirwa kugara uchiongorora zvese Liraglutide jekiseni semaonero; iwe unofanirwa kutora jekiseni rako kana mhinduro yacho isina ruvara, yakajeka, uye isina chero zvikamu zvinooneka. Kana iyo mhinduro yako ikatanga chero isina kujairika ruvara, usatora iyo pasina kubvunza nachiremba wako.
Liraglutide poda piritsi inoenderana nekushivirira kwemuviri wako, zera uye mamiriro ehutano ari kurapwa.
Dhigirii yevanhu vakuru
Chirwere cheshuga 2
The kwokutanga Liraglutide poda (204656-20-2) dofo kune vakuru ndeye 0.6mg, iyo inofanira kutorwa kamwe pazuva pazuva kwevhiki imwe. Mushure mevhiki imwe chete, iyo dosage inogona kuchinjirwa ku1.2mg subcutaneously kamwe chete pazuva, uye kana iwe usingakwanise kudzora pamusoro pechirwere, chiremba wako anogona kuwedzera mwero zvakanyanya ku1.8mg pazuva. Iyo Liraglutide chiyero chekuchengetedza chinofanira kunge chiri pakati pe1.2 ne1.8 mg pazuva. Nekudaro, iyo yakanyanya mwero ndeye 1.8mg pazuva.
Iyo 0.6mg yekutanga dhigirii pazuva inoitirwa kudzikisa zviratidzo zvegomarara zvichikonzerwa kubva mukutanga kwekurapa uye haigone kuve yakakwanira kutonga glycemic. Nekudaro, Liraglutide haisi insulin inotsiva uye varwere vane mhando 1 chirwere cheshuga mellitus kana chirwere cheshuga ketoacidosis havafanire kuitora. Paunotanga kurapa uku, funga nezvekudzikisa insulin yakavanzika kuti uderedze njodzi ye hypoglycemia.
Mwoyo njodzi kuderedzwa
Iyo yekutanga Liraglutide dosage yevakuru vane matambudziko emwoyo ndeye 0.6mg pazuva uye inofanira kutorwa kwevhiki yekutanga. Mushonga wacho unofanirwa kuwedzera kune 1.2mg pazuva muvhiki inotevera, uye kana iwe usingakwanise iyo glycemic control, chiremba wako anofanirwa kuwedzera dosi yacho mberi kune 1.8mg pazuva. Zvisinei, panguva iyo Liraglutide powder dosi inowedzerwa kune iyo yakakwira, iwe unenge wave wawana iyo yaunoda mhinduro. Mushonga wekugadzirisa unofanirwa kunge uri pakati pe1.2mg uye 1.8mg pazuva, nepo yakanyanya yakakura dofo ndeye 1.8mg pazuva.
Liraglutide mukuru dofo rekuremerwa kana kufutisa
The liraglutide uremu kuwedzera dosage kunofanirwa kutevedzera, kudzikisa mukana wekusangana nezviratidzo zvegastro. Iyo yekushandura dosage inogona kunonoka kwevhiki yekuwedzera kuti uwane mibairo iri nani. Nekudaro, chiremba wako anofanirwa kukutungamira mukuita uku. Mushonga wekutanga pano 0.6, iyo inofanirwa kutorwa kamwe kamwe pazuva. Muvhiki yechipiri, iyo piritsi inogona kuwedzerwa kune 1.2mg pazuva; muvhiki rechitatu, iyo dosage inogona kukwidziridzwa zvakare ku1.8 pazuva. Muvhiki rechina, iyo dosage inofanirwawo kuwedzera kune 2.4mg uye vhiki yechishanu kusvika 3mg kamwe pazuva. Nekudaro, chiremba wako achakutungamira iwe pane nguva uye nenzira yekuvandudza dosage.
Iyi piritsi yekugadzirisa pano ndeye 3mg kamwe pazuva, asi kana muviri wako usingakwanisi kushivirira, chiremba anogona kukurayira kuti utore mushonga. Kurwara kuremerwa kwehuremu uchishandisa uyu mushonga unongowanikwa uine yakakwira dosages. Pakufutisa, iyo Saxenda Liraglutide brand yakaratidza kuve yakakosha mukutakura uremu, uye mushonga haushandiswe pakurapa kwerudzi rwe 2 chirwere cheshuga mellitus. Nekudaro, Victoza anozivikanwa nekurapa kwemhando 2 chirwere cheshuga mellitus uye matambudziko emoyo.
Liraglutide jekiseni jekiseni rinofanirwa kungotorwa nevana veanopfuura makore gumi zvichikwira. Chero mwana akaderera pane izvozvo haafanire kupihwa mushonga uyu kunyangwe iwo achiratidza zviratidzo zvinogona kurapwa neiyi peptide. Iyo piritsi yevana liraglutide dosage zvakare zvinoenderana nemamiriro ehutano ari kurapwa. Iyo inokurudzirwa madhidho ndeiyi inotevera;
Pediatric dosage yeDhiabetes Type 2
Iyo yakakurudzirwa yekutanga Liraglutide jekiseni piritsi ndeye 0.6mg, iyo inofanira kutorwa kamwe chete pazuva pazuva kwevhiki imwe chete. Mushure meizvozvo, iyo dhiefiti inogona kuwedzera kune 1.2mg pazuva, uye kana glycemic control isati yawana, mushonga unogona kuwedzera iyo dhigiri mberi ku1.8 gm muvhiki inotevera. Mushonga wepamusoro wevana wetiabetes chirwere chechipiri ndi1.8mg pazuva, nepoji yekugadzirisa iri kubva ku0.6mg kusvika 1.8mg pazuva.
Iyo liraglutide inogona zvakare kuve yakarongedzwa kuvana kuti vabatsire pakurapwa kwemamiriro akasiyana ehutano akadai setsvo uye zvinetso zvechiropa. Nekudaro, pakurapa aya maviri mamiriro, iwe unofanirwa kutora Liglutide nekuchenjerera sezvo kunogona kutungamira kwakakomba mhedzisiro kana yakanyanyisa. Hapana dhizauko yekugadziriswa inokurudzirwa kana uchitora liraglutide peptide yezviropa kana zvetsvo nyaya. Paunenge uchitora liraglutide dosage, deredza chero insulin yekudya kuti udzikise njodzi ye hypoglycemia.
Kuwedzeredza chero zvinodhaka haisi zano rakanaka uye harifanirwe kukurudzirwa kana uchitora a Liraglutide dosi yekuremerwa uremu kana kurapwa kwemamwe mamiriro ehutano. Iwe unoyambirwa kuti ugare uchinamatira kune mirayiridzo yemyero yakapihwa nachiremba wako. Kuwedzeredza kwakanyanya kuchakonzera kukuvara kwakanyanya, uko kunogona kukanganisa hutano hwako kana kutotungamira kune mamwe matambudziko ehutano. Nekudaro, dzimwe nguva, kunyanyisa kunogona kukonzerwa netsaona kana maitiro emuviri wako pamushonga. Mhedzisiro inowanzoitika yekudzivirira inosanganisira kuromba kwakanyanya uye kurutsa. Paunoona kuti watora dosi yakawanda kupfuura yakakurudzirwa, tsvaga kurapwa nekukurumidza sezvaungagona. Iwe unogona zvakare kusvika kuna chiremba wako rubatsiro.
Kwemakore, Liraglutide yakaratidza kuunza mabhenefiti akasiyana, kunyanya munyika yekurapa. Nekudaro, iwe unogona kungoona zvakakwira liraglutide zvinobatsira, kana iwe ukanamatira kune mirayiridzo yemyero uye kudya kwakakodzera kana kurovedza muviri sekurayirwa nachiremba wako. Heano mamwe eanonyanyo kuzivikanwa Liraglutide mabhenefiti.
Inovandudza Type 2 chirwere cheshuga
Liraglutide zita rezita Victoza rave kushandiswa uye rakatenderwa neFDA kurapwa kweshuga rudzi 2. Mushonga unobatsira mukudzora shuga yeropa mumuviri wako. Kana huwandu hweshuga hwakakwira mumuviri wako, liraglutide inosimudzira makoga ako kuti abudise yakawedzera insulin enzyme iyo inobatsira mukudzvinyirira glucose yeropa.
Rubatsiro mukurwisa Kufutisa uye uremu
MuUnited States of America, FDA yakabvumidza Liraglutide yekurapa kufutisa mushure mekunge yaratidza kuti inoshanda mukudzvinyirira chishuvo chekudya uye kudya kwemakoriori kwakabatsira mukutakura uremu. Paavhareji, vakadzi vakasangana nekurema kwakanyanya pavanotora liraglutide uremu kupfuura varume. Nekudaro, hazvireve kuti varume havazobatsirwe kubva mushonga uyu. Kuti uwane zvirinani uremu hwechiitiko neinodhaka iyi, kudya kwakakodzera uye kurovedzera muviri kunofanirwawo kuperekedzwa nemupimo.
Inodzivirira iyo Vascular system
Iyo liraglutide yakaratidza kuve yakakosha mukudzivirira mwoyo wako tsandanyama uye kuderedza njodzi yezvirwere zvemoyo. Zvidzidzo zvekurapa zvinoratidzawo kuti kutora liraglutide, kunatsiridza chirwere chemoyo chinokonzerwa nerudzi 2 chirwere cheshuga mellitus uye kufutisa. Mushonga uyu unobatsirawo mukuenzanisa neropa rako, iro rinobatsira mukukwidziridza hutano hwako hwemhasuru.
Mushonga uyu unonzi unokonzeresa zvakare kugadzirisa hutano hwehuropi hwako, kubatsira mukutadza kuzvidya moyo, uye inogona kushanda seyakagadzirirwa kupikisa-oxidant uye anti-immune. Mune kumwe kuongorora kwekurapa, liraglutide yakaratidza kuti inogona kubatsira vanhu vane chinwiwa chinwiwa. Nekudaro liraglutide overdose inogona kukufumura iwe kunehutano hutano uye kukanganisa zvese zvinotarisirwa zvinobatsira.
Anenge ega ega mushonga, kana ukashandiswa zvisirizvo kana kuwedzeredzwa unogona kukuisa mhedzisiro yakaipa, uye liraglutide haina kusarudzika. Nekudaro, dzimwe nguva mhedzisiro inogona kuita semhedzisiro yemuviri wako yaunopindura nayo kune liraglutide uremu hwemuti mushonga. Vamwe liraglutide yambiro zvakajairika uye zvinopera nenguva, asi kana zvikaitika kuti zvinotevera zvikasapera nenguva kana zvikanyanyisa, tsvaga kurapwa.
Runny mhino, kukosora kana kutsvedza
Kupisa kana kunetsa pakurara
Liraglutide Injection nzvimbo rednessor rashes
Kuputirwa uye kurova kwemwoyo
Kune nyevero dzakakomba dze liraglutide dzinoda kurapwa nekukurumidza kana uchinge watanga kusangana navo, uye dzinosanganisira;
Ganda jena kana maziso
Kana iwe ukatanga kufunga nezve kuuraya, uchizvikuvadza iwe kana vamwe
Rumefu, kutsvukirira pahuro, rurimi, kumeso, maziso kana muromo.
Zvakaoma kumedza kana kufema.
Kune izvi zvakakomba Liraglutide mativi, iwe unoyambirwa kuti umire kutora iyo madosi pari pakarepo paunenge uchitsvaga rubatsiro rwekurapa.
Kupindirana kwezvinodhaka kunogona kukanganisa mashandisiro aunoita mushonga wako kana kukuisa panjodzi yekusangana nematambudziko. Naizvozvo, usati watanga kutora Liraglutide dhigiri, zvakakosha kuzivisa chiremba wako nezve chero humwe hutano hwauri pasi mushonga. Mamwe madhiragi haakwanise kushanda pamwe, uye zvakanaka kuti chiremba wako ave mukuziva nezvemumwe mushonga waungave uchitora. Kuti uve parutivi rwakachengeteka, usatanga, shandura dosi kana kurega kumwa chero mushonga usinga bvunze nenyanzvi yezvekurapa.
Iwe unoyambirwa kuti usatora chero mushonga uyu chero imwe mishonga ine Liraglutide sezvo inogona kutungamira mukunyanyisa uye kukufumura iwe kune zvakakomba mhedzisiro. Zvichienderana nemamiriro ako ehutano, chiremba wako anokupa iyo yakakodzera Liraglutide kudyidzana kukwidziridza mhedzisiro. Kune akawanda madhiragi iwe aunotora pamwe neLiraglutide akadai acetohexamide, albuterol, cinoxacin uye danazol, pakati pevamwe vazhinji.
Maererano ne liraglutide wongororo pamapuratifomu akasiyana online, vashandisi vazhinji vanogutiswa nemhedzisiro uye zvikwanisiro zvavakawana kana vachinge vatora mushonga. Zvidzidzo zvekurapa zvakare zvinoratidza kuti mushonga uyu wakabatsira sei pakurapa kwemamiriro akasiyana ekurapa akadai sekufutisa, mhando 2 chirwere cheshuga mellitus, matambudziko eitsvo uye mukudzivirira zvirwere zvemoyo zvichikonzerwa nemamiriro ehutano akasiyana. Iko kuwirirana kwe liraglutide kwakaratidzawo kuve kune simba pakurapa chirwere cheshuga 2 muvana veanopfuura gumi emakore.
Nekudaro, vamwe vashandisi vakaita zvakashata nemushonga uyu, asi izvo zvinogona kuve zvinokonzerwa neLiraglutide overdose kana kushivirira kwemuviri. Nhau dzakanaka ndedzekuti liraglutide side madhara inogona kushandurwa kana iwe ukabatana nachiremba wako munguva yakanaka. Nzira yakanaka yekudzivirira kusangana neyakaipisisa mhedzisiro paunenge uchitora mushonga uyu uri kuenda kunoongororwa chiremba usati watanga kurapwa kwako uye nekubvumira medics kuti ikupe iyo chaiyo dosi yacho. Izvo zvakare zvinoda kutevedzera dosage mirairo uye kuzivisa chiremba wako nezve chero chero imwe mishonga yaungave uchitora.
Mushonga uyu wakaratidza kuve wakakosha munyika yekurapa zvakanyanya pakurapwa kwekufutisa, Type 2 chirwere cheshuga uye matambudziko emoyo, pakati pevamwe. Liraglutide poda (204656-20-2) yekutengesa inowanikwa pazvitoro zvakasiyana zvepa online, asi unozozviona mumazita emhando dzakasiyana siyana saSaxenda neVictoza. Nekudaro, ita shuwa kuti unzwisise chinoshandiswa brand imwe usati waita odha yako. Sezvambotaurwa pamusoro apa, yega yega liraglutide zita zita rinoshandiswa kune chinangwa chakati. Saxenda inotenderwa kuderedza uremu uye kurapa kwekufutisa uku Victoza ichishandiswa mhando kurapwa kwechirwere cheshuga 2 pamwe nezvirwere zvemoyo zvichikonzerwa nehurefu hweropa. Nekudaro, tevera iyo yekuraira yekudzivirira kuti usasangana neLiraglutide side madhara.
Zvinokurudzirwa kuti utsvage chaiyo nezve yako liraglutide buy kwaunobva usati waita kutenga kwako. Nhasi kune vazhinji vanotengesa peptide pamusika, zvichiita kuti zvikuomere kuziva iwe kuti unowana kupi mushonga unodhaka uyo uchavimbisa iwe unoorora mhedzisiro. Tarisa uone liraglutide wongororo pane yevatengesi webhusaiti kuti uwane kutarisa kwezvinhu zvigadzirwa uye nemutengesi anoshanda sei. Kusarudza inonyanya kuzivikanwa uye mukurumbira liraglutide mutengesi mutengesi kunovimbisa iwe nezvemhando yepamusoro masevhisi uye emhando zvigadzirwa zvekurapa. Liraglutide mutengo unosiyana kubva kune mumwe mutengesi kuenda kune mumwe.
Iwe haufanirwe kunetseka nezve chero chinhu kana uchitora Liraglutide sezvo iri yemutemo mushonga uye nekuda kwemigumisiro iri nani, zvinosanganisira mushonga wako mukutenderera kwerosi rese.
Kaakeh, Y., Kanjee, S., Boone, K., & Sutton, J. (2012). Liraglutide ‐ inokonzeresa kukuvadza kwetsvo. Pharmacotherapy: Iyo Nhoroondo yeHurumende Pharmacology uye Dhigi Therapy, 32(1), e7-e11.
Marso, SP, Daniels, GH, Brown-Frandsen, K., Kristensen, P., Mann, JF, Nauck, MA,… & Steinberg, WM (2016). Liraglutide uye mwoyo nemhedzisiro yemhando mune 2 chirwere cheshuga. New England Journal of Medicine, 375(4), 311-322.
Lind, M., Hirsch, IB, Tuomilehto, J., Dahlqvist, S., Ahrén, B., Torffvit, O.,… & Sjöberg, S. (2015). Liraglutide muvanhu yakarapwa mhando 2 chirwere cheshuga neakawanda emazuva ese insulin majekiseni: zvakasarudzika kliniki muedzo (MDI Liraglutide muyedzo). Bmj, 351, h5364.
Davies, MJ, Bergenstal, R., Bode, B., Kushner, RF, Lewin, A., Skjøth, TV,… & DeFronzo, RA (2015). Kubudirira kwe liraglutide yekuremerwa uremu pakati pevarwere vane mhando 2 chirwere cheshuga: iyo SCALE yeshuga yakasarudzika muyedzo wekliniki. Jama, 314(7), 687-699.